I-China Barbed Wire Ukwenza Umatshini Wokwenza kunye neFektha | UJiake
Imodeli No: CS-A, CS-B, CS-C
Umatshini wokuchwetheza ngesantya esiphezulu wentambo yeJiake Mashishini unika isisombululo esifanelekileyo sokwenza i-Barbed wire.
Ucingo lwethu oluhlabayo kunye ne-razor oomatshini abasebenza ngocingo kulula ukuluqhuba, lunokunyusa ngokubonakalayo imveliso, kwaye lulungele ukuveliswa kweendlela ezahlukeneyo zokukhusela iingcingo.
Iintlobo ezintathu: eqhelekileyo ezijijekileyo, umtya omnye, twist kabini umva
Impahla engekasilwa: ucingo kwalenza, PVC camera ucingo, njl
Umsebenzi omnye unokusebenzisa oomatshini abaninzi:
Iyure enye inokuvelisa malunga ne-70KG / 40KG / 50KG:
Oluhlabayo wocingo Ukwenza Machine uvelisa ngocingo oluhlabayo. Ucingo oluhlabayo lusetyenziselwa ukhuselo, kwibala lokudlala, ukondla imfuyo okanye umda welizwe, kukhuselo lwesizwe, ezolimo, ukufuya izilwanyana, indlela ekhawulezileyo, njl njl.
Senza iimodeli ezintathu zomatshini ocingo ocingileyo: I-CS-A sisixhobo somatshini sokucoca i-bar eqhelekileyo; I-CS-C ngumatshini ococekileyo ophindwe kabini oxineneyo; I-CS-B ngumatshini omnye owenza ibharethi.
Umzekelo I-CS-A I-CS-B CS-C
Main wire ubukhulu 1.5-3.0mm 2.0-3.0mm 1.6-2.8mm
Ngocingo oluhlabayo ubukhulu 1.6-2.8mm 1.6-2.8mm 1.6-2.2mm
Isithuba esinebhadi 3 ", 4", 5 4 ", 5" 4 ", 5"
Inani elijijekileyo 3-5 7
Imoto 2.2kw 2.2kw 2.2kw
Impahla engekasilwa Ucingo kwalenza okanye PVC camera ucingo. Ucingo kwalenza Ucingo kwalenza
Imveliso I-70kg / h, 25m / min 40kg / h, 18m / imizuzu 50kg / h, 18m / min
Ubunzima bebonke 1050KG I-1000KG 1050KG
Ukupakisha ubungakanani 5.9CBM 5.8CBM 5.9CBM
Ukufakwa ngesandla, Kulula ukuseta;
Isembozo sensimbi kwi-shaft yokuqhuba umsebenzi wokhuseleko;
Izinto zokugcina kunye nomthamo ophezulu;
Ukubala ukubala inani leebarb kunye nokubala ubude bocingo oluhlabayo.
Ukutshintsha kweqhosha kunye nesixhobo sokuqalisa ukuqala nokumisa umatshini ngokulula.
Ukukhupha okulula nangokulula kumatshini.
Inkqubo yesikhokelo yokuthintela iicarls zentsimbi.
Ucingo oluvaliweyo lusetyenziselwa ukhuseleko, kwifowuni yokudlala, ukondla imfuyo okanye umgadi wesizwe, kukhuselo lukazwelonke, ezolimo, ukulima izilwanyana, i-expressionway, njl.